काठमाडौंमै बच्चाहरूले चउरमा खेल्न गएको बेला यस्तो अवस्थामा फेला पारे यी क्युट नानु ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
काठमाडौंमै बच्चाहरूले चउरमा खेल्न गएको बेला यस्तो अवस्थामा फेला पारे यी क्युट नानु !
Published : 29 July, 2020 10:57 am
नेपालमा अहिले क्षणिक लाभ लिनेदेखि लिएर कच्चा उमेरमा हुने अवैध सम्बन्धका कारण गर्भ फाल्नेहरुको संख्या बढ्दैछ । समाजको डरका कारण मान्छेहरु विशेष गरेर भर्खरका युवतीहरुले यस्तो खालको समस्या भोग्दै आएका छन् । यो बीचमा सोमबार साँझ ६ बजेतिर कपनस्थित आकाशेधाराको चौरमा देखिएको एक दृश्यले पनि यो खुलासा भएको छ ।